Kukadzi Vashandi Dambudziko Rine Mubairo Wemubhadharo Bhandi | Ndinobva mac
Pave nenguva yakareba kubva Apple yatanga Chiitiko chinetso kune vashandisi veApple Watch. Dambudziko rekupedzisira ravakatangisa raive gore rapfuura rinoenderana neNational Parks, iri raive padanho repasirese uye vakabva vatanga imwe yeVeterans Day chete kune vashandisi muUnited States.
Nhasi uno rimwe rebasa raro rebasa rinozivikanwa, asi mune ino vashandi vekambani, saka parizvino zvinoita sekunge vamwe vashandisi vachatofanira kumirira kwenguva yakati rebei kuti vaone chinetso. Uye zvakare, dambudziko iri revashandi rine mubairo uye nderekuti ivo vachazopa tambo yevashandi vanoshanda zvakanyanya.
Mutambo Loop tambo mune yakasarudzika ruvara kune vashandi
Uye ndezvekuwana mubairo wakakosha panguva ino uye avo vanokwanisa kukunda chiitiko ichi vanoenda kumba tambo yakasviba ine ruzivo rwemavara bhuruu, tsvuku uye girini, senge mhete dzekuita dzatinadzo pamawatch. Zvingave zvakanaka kuti iyo femu iite iri dambudziko rekuvhura kune vese vatengi vayo, asi sezvatinowanzo taura zvakatenderedza pano: Kurota kuri mahara ...
Chero zvazvingaitika, chinhu chakakosha kuziva kunetsekana uko vashandi veApple vanoda kuwana iyi yakasarudzika tambo vachasangana nayo, uye haisi dambudziko rakareruka. Izvo ndezve kuita kuti ese maEvhisi mhete akavharwa mazuva ese aFebruary. Uku kudenha kune vazhinji kuchave kuri nyore uye kune vamwe kungatove kusingakwanise. Pakupedzisira ndezvekufamba uye izvo zvinotarisirwa ndezvekuti vashandi vari kushingaira sezvinobvira. Dambudziko harisi nyore uye zvese zvinoenderana nemushandi iye pachake kana achida kuzadzisa dambudziko iri kana kuti kwete Ini ndaizoyedza, iwe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Kukadzi Yevashandi Dambudziko ine yakasarudzika mubairo tambo
Zvese hazvina kurasikirwa neAirPower: inoratidzwa zvakare pawebhusaiti yepamutemo yeApple
Ziva nekukurumidza kuti chako chinotevera musangano chichava neMusangano Unotevera